अविरल वर्षाले व्यापक क्षति: तत्काल राहत राशी वितरण - The Sikkim Chronicle
SC Desk Apr 14, 20210281
SC Bureau Apr 7, 20210562
SC Bureau Dec 30, 202006906
SC Desk Mar 26, 2021049
Bimal Thapa Aug 20, 20200996
admin Jul 16, 202002427
Jun 30, 2020 - 13:22
गत केही दिन यता अविरल वर्षाको कारण उत्तर सिक्किमका विभिन्न क्षेत्रहरुमा व्यापक क्षति पुग्न गएको छ। 27 जूनको दिन अचानाक आएको भल-पहिरोले माथिल्लो जङ्गुको पासिङ्दाङ औधी क्षतिग्रस्त बनेको छ। सो क्षेत्रका 17वटा घरलाई क्षचि पुगेको छ भने 35 परिवारको निम्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले पासिङ्दाङ प्राथमिक चिकित्सालयमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ। यो आकष्मिक भल-पहिरो अगावै पासिङदाङ जाने सड़क पनि लगातार वर्षाले क्षति पुग्न गई बन्द हुन पुगेको थियो।
जून 27 कै दिन डिक्चु नजिक आँपडाँड़ा स्थित तिस्ता चरण-5को बाँध रहेको स्थानमा पहिरो गएको थियो। सोही पहिरोको कारण तल्लो जङ्गुको लुम अनि लिङत्याङ गाउँ जाने सड़क पनि बन्द भएको हो। यस सन्दर्भमा एनएचपीसीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो बाँध यस्ता प्राकृतिक प्रकोप झेल्न सक्ने किसिमले निर्माण गरिएको हुनाले पहिरोले बाँधलाई कुनै क्षति नपुर्याएको साथै तिस्ता नदी छेउ-छाउका जनसाधारण नआत्तिई बसिदिने आग्रह गरेको छ।
28 जूनको दिन उत्तर सिक्किम स्थित तिङ्दा अनि तेनेक अन्तर्गत रहेको राजमार्गलाई पहिरोले दुई स्थानहरुमा क्षति पुर्याएको छ। सो पहिरो ग्रसित क्षेत्रबाट5परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। अन्य धेरै ठाउँहरुमा सड़क धस्किएर, पहिरो गएर, पुल भत्किएर भारत-चीनको सिमानासम्म पुग्ने सड़क समेत बन्द भएको छ।
उत्तर सिक्किमका बालीहरुमा पनि अविरल वर्षाको कारण क्षति पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँको लिङ्चोम अन्तर्गत रहेका अलैंचीबारी विभिन्न स्थानहरुमा पहिरोले सोहोरेर लगेपछि तिनीहरुले व्यापक नोक्सानी खप्नु परेको त्यहाँका कृषकहरुले बताएका छन्। सिक्किमका धेरै कृषकहरुको मुख्य आम्दानी श्रोत अलैंची नै हो। यसका साथै डल्ले खोर्सीनीको खेतीलाई पनि वर्षाले व्यापक क्षति पुर्याएको तिनीहरुले बताए।
29 जूनको दिन राज्यका मुख्यमन्त्री पी. एस. गोलेले उत्तर सिक्किमको पहिरो ग्रसित क्षेत्रहरुको भ्रमण गरे। जङ्गुका विभिन्न पहिरो ग्रसित क्षेत्रहरुमा मुख्यमन्त्री गोले स्थलगत निरिक्षण गर्न पुगेका थिए। यसै सिलसिलामा पहिरोले क्षति पुर्याइ नोक्सानी झेल्न परेका परिवारहरुलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट2लाख रुपियाँको दरले राहत राशी प्रदान गरेका थिए। उत्तर सिक्किम प्रशासनद्वारा पनि पीड़ित परिवारहरुलाई 1 लाख 19 सय रुपियाँको दरले राहत राशी वितरण गरियो।
गत 24 जूनमा भू-राजस्व अनि आपदा प्रबन्धन विभागद्वारा वर्षा ऋतुको तैयारीलाई ध्यानमा राखेर टासिलिङ सचिवालयमा एक राज्य स्तरीय बैठक डाकिएको थियो। यसको अध्यक्षता सो विभागीय मन्त्री कुंगा निमा लेप्चाले गरेका थिए। सो सभामा वर्षा ऋतुले ल्याउने जोखिम अनि चुनौतीहरुको सामना गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरुले के-कस्ता कदमहरु उठाए भन्ने विषयमाथि व्यापक समिक्षा गरिएको थियो। सभामा मन्त्री लेप्चाले वर्षाले ल्याउने विभिन्न चुनौती अनि क्षतिका चर्चा गरेका थिए भने सो क्षतिलाई प्रभावकारी ढंगले कसरी नियन्त्रण साथै न्यूनतम गर्न सकिन्छ भनी विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट सुझाउ पनि लिइएको थियो।
गत 28 जूनको दिन भाजपा सिक्किमले डोनेर (DoNer) राज्यमन्त्री डा. जितेन्द्र सिहंलाई पत्राचार गरी केन्द्र सरकार तथा आपदा प्रबन्धन विभागबाट राहत र पुन:स्थापनाको निम्ति आग्रह समेत गरेको छ।
SC Desk Dec 9, 202001182
Bimal Thapa Sep 20, 202002875
Bimal Thapa Jul 1, 20200640
admin Jun 22, 20200654
Bimal Thapa Sep 11, 20200529
SC Desk Apr 14, 20210310
admin Sep 1, 202001461
Bimal Thapa Nov 23, 20200473
SC Desk Aug 4, 20200250
SC Desk Mar 28, 20200559
admin Oct 6, 20200295
admin Aug 31, 20200705
Bimal Thapa Jul 16, 20200456